सिंहः–आइतबार काम गर्ने उत्साहा बढ्नेछ । शारीरिक एवं मानसिक रुपमा काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । उत्तम भोजन र आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ । दामपत्य जीवनमा सुखानुभूति हुनेछ । सोमबार र मंगलबारका दिन मध्य देखिन्छन् । हेलचक्र्याई गरेर काम नगर्नु होला असफलता हात लाग्नेछ । बुधबार विहिबार साता कै उत्कृष्ट दिन हुनेछन् । उद्योग पराक्रम बढ्नेछ
। रोकिएका धेरै काम सम्पन्न हुनेछन् । कला सहित्यमा रुची बढ्नेछ । आफ्नै प्रयासमा आर्थिक उन्नति हुनेछ । ईष्टमित्र,साथी भाईबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
मकरः–आईतबार बढि प्रतिकुल देखिन्छ । अहार विहारमा ध्यान दिनुहोला नत्र स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । का
म गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ला । पश्रिमको मुल्य लिन ठूलै चलखेल गर्नु पर्ला । सोमबार र मंगलबारको दिन भने मध्यम देखिन्छ । आफ्ना भन्दा अरुका काम बढि हुनेछन् । बुधबारबाट भने समय अनुकुल बन्नेछ । रोकिएका कामले गति लिनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुहुनेछ । सहज र सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । घर परिवारमा रमाईलो हुनेछ । सहयोगका प्रस्ताव आउने छन् । स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
हेर्नुहोस आजको राशीफल, तपाईको आजको दिन कस्तो छ ?
मनकामनामाईले हामी सबैको मनोकाक्षा पूरा गरुन्, पढ्नुहोस् तपाईको राशीफल
पाथीभरा माइ हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशीफल
फाल्गुन ५ गते बिहीबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल